Mitendry milina i Torkia (febroary 2006)…. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2018 4:25 GMT
Amerikan Turk, izay naratra vao haingana tao anaty lalao baolina kitra (aza manambe ry namako) nanamontsana zava-bita in-45 tao anatin'ny telo herinandro farany, angamba tsy midika zavatra betsaka ho an'ny rehetra izany, saingy heveriko fa mahaliana ara-antontan'isa …. sy ho an'ireo mpanoratra ambiny tantaraiko amin'ity herinandro ity, holazaiko aminareo ny isan'ny lahatsoratr'izy ireo nandritra ny telo herinandro lasa. Na dia izany aza, tohizana ny fanavaozam-baovao… Murat manome antsika fijery feno momba ireo fihetsiketsehana Miozolomana manerana izao tontolo izao noho ilay sariitatra Mohammed vao haingana, saingy manasongadina mafy ny fihatsarambelatsihin'ireo Silamo izay manohitra ny sariitatra raha mijaly noho ny horohorontany tany Pakistan kosa ireo ankizy.
Erkan's Field Diary (lahatsoratra 69 tao anatin'ny herinandro telo) milaza ny famonoana pretra katolika iray tany Torkia izay misy ifandraisany amin'ny hatezerana manoloana ireo sariitatra Mohammed. Nankany amin'ny fitsarana ihany koa i Erkan izay nanaovana ny fitsarana ireo mpanao gazety Tiorka maromaro, fampahafantarana mahaliana momba ny rafi-pitsarana Tiorka izany. Nandefa dika mitovy an'ilay sariitatra momba an'i Tiorkia manatevin-daharana ny Vondrona Eoropeana izay hitako fa mahatsikaiky izy, saingy mety tsy hahazo izany ireo izay tsy nahita trano fivoahana tahaka izany .
Ignore Me If You Can (lahatsoratra 13 mandritra ny telo herinandro) mandefa momba ireo ankizy mpangataka ao Tiorkia, fihaonana mahatsiravina nefa mahazatra izay mitranga any Torkia. Manambara ny fampidirana mpanoratra vaovao tao amin'ny Metroblogging: Istanbul (lahatsoratra 25 ao anatin'ny telo herinandro). Mitantara karazan-javatra tamin'ity herinandro ity ny Metroblogging izay miompana amin'ny fisolokiana eny amin'ny milina fakàna vola “guichet automatique” ao Istanbul sy ny fanomezam-boninahitra ny zava-pisotro misy alikaola Raki.
Talk Turkey (lahatsoratra 10) manoratra momba ny fiainana ao amin'ny “OC”, ary manana lahatsoratra mahafinaritra momba ny “marika bilaogera” izy.
Turkish Torque (lahatsoratra 60 ao anatin'ny telo herinandro) manoratra momba ny fangorahana ao amin'ny natiora sy momba ilay mpikorisa Olaimpika voalohany ao Torkia. Na dia izany aza, ny lahatsoratr'i Tork izay manan-danja indrindra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia ny filazana fa nofidin'ny Best of Blogs ho iray tamin'ireo bilaogy 12 sangany tao Azia izy. Arahabaina!
Ny bilaogy farany tantaraina amin'ity lahatsoratra ity sady koa mpandresy tamin'ny isan'ny lahatsoratra betsaka indrindra nandritra ny telo herinandro – izay nahatratra 93 – dia i Mavi Boncuk, izay vao avy nankalaza ny lahatsorany efa miisa 1300. Manoloana ireo lahatsoratra marobe sy tantara Tiorka sy Ottoman, sarotra ny mifidy izay ho avoaka, saingy ity kosa, na izany aza, ny lisitra fohy avy amiko: fiaran-dalamby an'ny sultan, ny tantaran'ilay Printsesy Durruhsehvar an'i Berar nodimandry vao haingana, printsesy Ottoman farany, ary boky iray tena tadiaviko, Slang in Turkish Culture (Tenin-jatovo amin'ny Kolontsaina Tiorka).
Farany, te-hiala tsiny amin'ireo bilaogera Tiorka izay tantaraiko matetika aho noho ny hakelin'ny ezaka ataoko, tena zava-dehibe ho ahy ny fisakaizana atolotr'ity vondrom-piarahamonina bilaogy ity ary mankasitraka tanteraka ny fanohanan'izy ireo aho.